Muta otu esi ogbi ogwe aka na Google Chrome maka Mac | Esi m mac
Muta otu esi ogbi ogwe aka na Google Chrome maka Mac
Ogologo oge gara aga, agha dị n'etiti ihe nchọgharị dị iche iche dị na ahịa. Mgbe anyị nyochachara nkuzi ntụnyere dị n’etiti ihe nchọgharị, a tụrụ ụkpụrụ dịka ọsọ ọsọ nke ibe, a tụrụ atụ ịdị arọ nke ngwa ahụ ma ọ bụ oriri akụ. Ugbu a ọ dị ka ndị mmepe ahụ adịla jụụ na mmelite dị ukwuu nke ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụ njedebe ruru.
N'ime ndị a kacha mara amara, anyị na-ahụ Safari na Chrome, nke ọ bụla nwere ọdịiche ya na myirịta. N'etiti akụkọ kachasị ọhụrụ anyị na-ahụ ohere nke imechi tabs. Safari nwere nhọrọ sitere na Mac OS X Captain, na-etinye ụda okwu na aka nri nke ogwe adreesị, na ịpị ya, anyị dara ogbi taabụ a. Ma Google Chrome o nwere nhọrọ a? Ee nke ahụ dị, mana ọ bụ ọkara zoro ezo.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ chọta taabụ. Ọ bụrụ na anyị mepee peeji ebe anyị na-atụ anya ịhụ vidiyo ma ọ bụ ụda, ọ gaghị enwe nsogbu. Mana oge ụfọdụ anyị nọ na peeji ebe vidiyo nke dị n'akụkụ ala ma mee ya na akpaghị aka. Dịka anyị anaghị atụ anya ya, ọ ga-ekwe omume na anyị amaghị ibe ịgbachi nkịtị. Atingchọta ya dị mfe. Ihe nnọchi anya okwu ga-egosi n'aka nri nke taabụ na-eme ụda.
Ozugbo achọtara, imechi ya dị mfe dịka ịpị taabụ na bọtịnụ ziri ezi. N'oge ahụ menu nke nwere ọtụtụ nhọrọ kwesịrị ịpụta, anyị na-achọ nhọrọ ahụ ogbi tab. Anyị na-pịa ya na ọ bụ ya. Ọ dị mfe iji nyochaa na anyị nwere nhọrọ akara, ebe otu na-egosi anyị okwu na ogwe osisi, iji gosi na akagbuola ya. N'ụzọ dị otu a, anyị ga-enwe mkpọchi taabụ a, mana anyị nwere ike ịga n'ihu na-ege ndị ọzọ nke taabụ ahụ.
Mgbe e mesịrị, ọ nwere ike ịbụ oge ịnụrụ ọdịyo ahụ site na taabụ nke dara na mbụ. N'okwu ahụ, ị ​​ga-arụ otu ọrụ a, mana ugbu a anyị họrọ: nwee ụda taabụ.
Nhọrọ a dị ma ọ dịkarịa ala na nsụgharị 55.0.2883.95, nke bụ nke m tinyegoro na Mac m ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị, melite na ụdị kachasị ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkuzi » Muta otu esi ogbi ogwe aka na Google Chrome maka Mac
Tim Cook ọ "enweghị nsọpụrụ nye ndị Irish"?
TwelveSouth weputara mgbaaka mbụ iji eyi Apple Watch, ActionSleeve